तिथि मेरो पत्रु » भावी कुकुर मालिक को लागि Bedlam फारम चेकलिस्ट
भावी कुकुर मालिक को लागि Bedlam फारम चेकलिस्ट
पछिल्लो पटक अद्यावधिक गरिएको: Mar. 26 2020 |7मिनेट पढ्न
* तपाईं चाहनुहुन्छ कुकुर प्राप्त.
सामान्य जनावरहरू को दुरुपयोग, र विशेष कुकुरहरूको, मात्र नैतिक विकल्प एक पाउन्ड देखि एक कुकुर बचाउन छ भन्ने दृढ विश्वास गर्न मालिक को नेतृत्व धेरै छ, जहाँ उहाँले इच्छामृत्यु सामना. यो एक कुकुर उद्धार गर्न एक अद्भुत अनुभव हुन सक्छ (मेरो उद्धार सीमा कोल्ली Orson मेरो डेस्क तल अधीनमा परेको छ), तर, कुकुर स्वामित्व नै जस्तै, यो सबैको लागि छैन. यो पनि एक राम्रो प्रजनन देखि एक ठूलो कुकुर पत्ता लगाउन अद्भुत अनुभव हुन सक्छ. म ती दुई छ, साथै: एक बथान भेडा र मेरो खेत रन, र नवीनतम, Clem, गुलियो संगत मेरो घर र जीवन suffuses. म उनको मा हेर्न लगभग हरेक समय मुस्कान. कसैले कुकुर तपाईंलाई कस्तो प्राप्त गर्नुपर्छ गरिदिएको सक्छ, पक्कै छैन म. तपाईं यो हेरचाह गर्न भयो, त्यसैले तपाईं प्रेम गर्न चाहाने कि मिल.
तर आफ्नो होमवर्क गर्छन. तैपनि forethought संग, यो एक crapshoot को कुरा रहिरहन्छ. पाल्तु जनावर स्टोर मा किनेको कुकुर संभावना inbreeding सिर्जना जहाँ पिल्ला मिल्स देखि उच्च-भोल्युम प्रजनन संचालन आएको र स्वास्थ्य र स्वभाव समस्या perpetuates. सम्पादक जेम्स Serpell र आफ्नो सहयोगी जे उल्लेख अध्ययन अनुसार. एक. घरेलू कुकुर मा Jagoe, पाल्तु जनावर पसलबाट प्राप्त कुकुर प्रजनकों वा स्याहार देखि कुकुर भन्दा सामाजिक डर र प्रभुत्व-प्रकार आक्रमण प्रदर्शन गर्न धेरै बढी सम्भावना हुन्छ. थुप्रै उद्धार र आवास कुकुर व्यवहार समस्या, आफ्नै को कुनै दोष माध्यम. तिनीहरूले दुरुपयोग गरिएको छु, विक्षिप्त, वा बारम्बार पुन बाहिर रहेका बालिग, कुरा गर्न भनेर, पशु चिकित्सा पेंसिल्वेनिया स्कूल विश्वविद्यालय अनुसार, तिनीहरूले बाध्यकारी चबाने जस्तै समस्या धेरै अधिक चाहाने, आक्रमण, भौंकने, ज्यादा, र के कल मानिसजातिले “अलग चिन्ता,” गुणस्तर प्रजनकों देखि purebreds भन्दा.
जिम्मेवार उद्धार समूह र आश्रय कामदारहरूको मात्र यो स्वीकार तर निश्चित adopters यो बुझ्न बनाउन, त्यसैले कुकुर फिर्ता उछाल छैन वा, झन् खराब, दुर्व्यवहार पीडित वा अरूलाई चोट. तर म मूलधारको घरमा हिंसात्मक वा संकटग्रस्त कुकुर सार्न पनि उत्सुक भएका खाँचोमा परेका कुकुर लागि आवेग र समर्पण संग suffused केही उद्धारकर्मीहरूले सामना छु. अनि कर्तव्यनिष्ठ प्रजनकों देखि पनि कुकुर आफ्नो आमा र भाइ बहिनी निर्धारित, केही क्षतिग्रस्त भनेर, डरलाग्दा, र cowering, अरूलाई सुरक्षित र भरोसायोग्य महसुस गर्न सिक्न जबकि. बेईमान वा लोभी प्रजनकों प्रशस्त कस्मेटिक वा व्यापारिक कारण कुकुर सामूहिक-उत्पादन, स्वास्थ्य वा स्वभाव इतिहास सन्दर्भमा बिना. कुकुर ब्रह्माण्डको अभिभूत द्वारा लगभग पूरै unmonitored र अनियमित भएकोले, underfunded स्थानीय सरकारहरूले, कुकुर आफ्नै मा साँच्चै हो चाहने मान्छे. यो सन्दर्भ लागि प्रजनकों र उद्धार समूह सोध्नु राम्रो विचार हो किन कि ', त्यसैले तपाईं आफ्नो अन्य कुकुर बाहिर काम गरेको छ कसरी देख्न सक्छौं.
यो कुकुर चयन नैतिक वा राजनीतिक काम गर्न dicey छ. तपाईं एक उद्धार कुकुर चयन भने कि ठेगाना, तिनले विशेष धैर्य र कौशल हुन सक्छ. सबैभन्दा कुकुर तालिम वा retrained सकिन्छ, पनि ठूलो उमेरका मा, तर तपाईं समय र काम को अनुरूप प्रतिबद्धता गर्न इच्छुक वा सक्षम छैन भने, कुकुर को अर्कै किसिमको राम्रो तपाईं अनुरूप सक्छ. यति धेरै खाँचोमा परेका कुकुर स्याहार मा जब त्यहाँ खालिस कुकुर अझै छ रही, मेरो मनमा, एक पूर्ण वैध विकल्प, र कहिलेकाहीं राम्रो एक.
* यो आफ्नो घरमा एक कुकुर लाने आउँदा आवेगशीलता आफ्नो शत्रु हो.
आफ्नो समय लिनुहोस्. तपाईं एक देखेर एक कुकुर निर्णय नगर्नुहोस् तपाईं एक टिभि मन पर्यो या सडक तल हिँडिरहेका. अथवा आफ्नो बच्चाहरु आश्चर्य, वा आफ्नो खाली अण्डा पार्ने आमाबाबुले, तपाईं सुनेर वा एक नस्ल स्मार्ट छ. सीमा collies स्मार्ट हो, तर तिनीहरूले unspeakably मूर्ख कुराहरू, फोहोर ट्रक बथान गर्न प्रयास जस्तै. स्मार्ट कुकुर जरूरी एक ठूलो पाल्तु जनावर छैन, जे भए पनि. Orson फ्रिज खोल्न र एक सम्पूर्ण चिकन हटाउन कसरी लाग्यो जब म खुश न त दार्शनिक न थियो.
* आफ्नो आशा राखेका कम.
कुकुर-खाद्य विज्ञापनहरु मा लन मा frolicking पिल्ले सुन्दर छन्, तर नहुनु तपाईं एक वास्तविक कुकुर प्राप्त गर्नेछन् छन्. रियल puppies housebreaking प्रशिक्षण समयमा दुर्घटना छ, लन लागि गल्ती गलैँचा, तपाईं कदर कुराहरू जुगल. रियल कुकुर जरायो Scat मा रोल र त्यसपछि ओछ्यान मा हप. तिनीहरूले शट र दबाइहरु आवश्यकता; तिनीहरूले बिरामी.
पार्क मार्फत सँगसँगै बाध्य गर्न रियल कुकुर मौका धेरै प्राप्त कहिल्यै सक्छ. यति धेरै कुकुर त नराम्ररी प्रशिक्षित गर्दै छन्, गैर कुकुर प्रेमीहरूको झन् अप्ठ्यारो बनाउन. सबै देश भर पुलिस नेल कुकुर हिंड्न मानिसहरूको लागि टिकट लेख्न. कुकुर मालिक आफ्नो घरपालुवा जनावरको लागि मुद्दा मिल’ काट्छ, पनि डरलाग्दो व्यवहार लागि. बीमा कम्पनीहरु झन् तपाईं कुकुर को जो नस्ल हेर्न जाँच, तिनीहरूले अनुमोदन छैन भने र नीति रद्द. केही पशु-अधिकार समूह कुकुर बढी कानुनी स्थिति दिनुपर्ने विश्वास, मानिसहरूले 'संग लगभग बराबर. केही विश्वास छैन मानिसहरूलाई अनुमति दिएको हुनुपर्ने “आफ्नै” एक कुकुर मा सबै. तर कुकुर प्रशिक्षण को तर्कसंगत सिद्धान्त स्वामित्व को जिम्मेवारी जोड दिन्छ.
* अनि यी जिम्मेवारीहरू लगातार देखिन सक्छ.
कुकुर यो घनघोर र ठंड गर्नुपर्छ पनि जब बाहिर जान आवश्यक. तिनीहरूले ध्यान आवश्यकता, स्नेह, उत्तेजना, र व्यायाम, पनि जब तपाईं थकित छौं, व्यस्त, वा छैन मूड मा. तपाईं कार्यालयमा देर रहन भने तिनीहरूको आवश्यकता तपाईं एक सप्ताह बन्द चाहनुहुन्छ जब abate वा छैन.
जानकार कुकुर प्रेम गर्ने यी समस्या आशा र हास्य र धैर्य तिनीहरूलाई चलाउनु. बदलामा, तिनीहरूले धेरै प्रेम प्राप्त, मजा, र मित्रता. कुनै पनि सम्बन्ध मा संघर्ष र पुरस्कार छन्, मानव वा कुकुर. यो कुकुर गर्न आउँदा म एक लामो दृष्टिकोण ले विश्वास. तपाईं पछिसम्मको देख्न आवश्यक, तपाईं तीन A.M मा भुइँमा हो विशेष गरी. प्रकृति को चमत्कार संग गलैँचा मा dabbing, गंध हटाउन प्रयास. लामो दृश्य मात्र यी पशुहरू को प्रकृति बुझ्न संग आउछ, र पनि ठूलो प्रयास तिनीहरूले सधैं हाम्रो संग जाल छैन भनेर स्वीकार.
* दुर्व्यवहार बहाना होसियार हुनुहोस्.
बस एक दशक पहिले, कुकुर पनि थिए “अपनाए,” छैन “उद्धार,” अझ भावनात्मक चार्ज धारणा. म अब गणना परिचय वा वाक्यांश संग आफ्नो कुकुर को वर्णन गर्न सक्छन् भन्दा बढी कुकुर मालिक: “त्यो शायद थिचोमिचो थियो।”म तिनीहरूलाई थाह कसरी सोध्नु, प्रमाण अक्सर चौडी छ, सबै भन्दा राम्रो मा.
दुरुपयोग तपाईं एक चाहनुहुन्छ मुख्य कारण हो देखि इच्छा एक कुकुर बचाउन भने होसियार हुनुहोस्. मानवता र सहानुभूति व्यक्त गर्न तरिकामा धेरै छन्, मान्छे वा जनावरहरू लागि, तर यस विशेष पशु आफ्नो घरमा बढिरहेको छ. तपाईं आफ्नो उद्देश्य misread वा गलत मान्यताहरु बनाउन भने, तपाईं को दुवै वर्षसम्म असरहरू सामना गरिनेछ.
स्टीवन आर. लिंडसे, एप्लाइड कुकुर व्यवहार र प्रशिक्षण आफ्नो बीजीय दुई-भोल्युम पुस्तिका मा, कुकुर को अधिग्रहण ज्यादती बारे गरे मान्यताहरु पडताल. मानव सम्पर्क र अन्य बचाउ व्यवहार डरले कहिलेकाहीं अघिल्लो दुर्व्यवहार गर्न महसुस गर्न सकिन्छ, लिंडसे स्वीकार्छन्. तर आश्रय कामदारहरू भावी adopters कुरा गर्दा व्याख्या आव्हान गर्न खप्पिस हुन्छन्, यो सत्य हो कि थाह बिना. “निस्सन्देह, शारीरिक र भावनात्मक दुरुपयोग हुन्छ र भय को एक महत्वपूर्ण कारण हुन सक्छ,” लिंडसे लेख्छन्. “तथापि, यो शायद एक यस्तो रिपोर्ट को आवृत्ति देखि आशा सक्छ कता हो कता कम अक्सर हुन्छ।”
कुकुर हामीलाई सही सक्दैनौं, वा आफ्नो आमाबाबुको बारेमा गुनासो, तिनीहरूले मानव क्रूरता सिकार छौं भन्ने अनुमान गर्न सरल छ, पनि अक्सर हाम्रो आफ्नै भावनात्मक आवश्यकता र इतिहास फिट एक विचार. तर आनुवंशिक, inbreeding, एक सोतरको र अवस्था, अन्य पक्षहरू बीच, पनि गहिरो कुकुर आकार गर्न सक्छन्. अधिकांश समय, हामी साँच्चै एक उद्धार कल्पना भन्दा कम सन्तोषजनक साबित हुन सक्छन् एक वास्तविकता थाहा कहिल्यै. के तपाईं त्यो एक कुकुर रूपमा insufficiently समाजमूलक थियो किनभने त्यो डरलाग्दा भनेर थाह थियो भने धेरै रूप यस कुकुर प्रेम होला?
* आफैलाई को सशंकित हुन र तपाईं देखि एक कुकुर रही गरिरहनुभएको मान्छे मा शंका आशा.
राम्रो प्रजनकों र कर्तव्यनिष्ठ उद्धार र आवास कामदारहरूको एक कुकुर लागि आफ्नो इच्छा को सावधान हुनेछ, पनि obnoxiousness को कुरा गर्न. तिनीहरूले आफ्नो तालिका बारेमा सोध्नेछौं, यार्ड, बार, बच्चाहरु, अनुभव कुकुर-मालिक र तिनीहरूले गर्नुपर्छ. वास्तवमा, तिनीहरूले छैन भने, तपाईं गलत ठाउँमा एक कुकुर खोजी सक्छ कि एक चेतावनी रूपमा ले. तिनीहरूले यस्तो अव्यावहारिक अपेक्षालाई एउटा प्राप्त वा छ त्यसैले धेरै मान्छे कुकुर लाखौं दुर्व्यवहार छन् कि कुकुरहरूको बारेमा यति थोरै थाह, फर्के, वा हरेक वर्ष छोडेर. तिनीहरूलाई वितरण गर्ने मानिसहरू धेरै देखेको छु, धेरै कहिलेकाहीं. तपाईं केही कठिन प्रश्नहरू सोधेर बिना दिन वा तपाईं एक बेच उत्सुक कसैले देखि एक कुकुर चाहँदैनन्.
* आफैलाई ठेगाना.
मान्छे समस्या उत्पन्न हुँदा कुकुर दोष थोपर्ने, तर तिनीहरू लगभग सधैं हाम्रो दोष हो. कि त हामी एक मूक छनौट गरे (बोका रेटोन मा एक condo एक Huskie ल्याउन), वा हामी साँच्चै एक कुकुर प्रशिक्षण समय र व्यक्तित्व छैन, वा हामी कल्पनामा शरण लिए. सम्भवतः, तपाईं प्रेम गर्न केही गर्नुपर्छ वा चाहनुहुन्छ किनभने तपाईं एक कुकुर रही छौं, वा अर्को कुरा प्रेम, वा तपाईं गइसकेको हो कि तपाईं प्रेम कुराहरू प्रतिस्थापन गर्न चाहन्छु किनभने. गलत वा बारेमा दुःखलाग्दा केही छैन, तर यो एक कुकुर दवाउनु वा ढिपी गरेर यसलाई अस्वीकार गर्न कुनै सेवा गर्छ, “म बच्चाहरु को लागि एक कुकुर मिल्यो” वा “म सिर्फ दूर burglars राख्न मिल्यो।”
अनि त्यो इच्छा प्रेम गर्छ अन्य विशेषताहरु नष्ट? तपाईं रोगी हो? तपाईं शोर लागि एक उच्च सहिष्णुता छ, विकार, र खैलाबैलामा? तपाईं पुरस्कार सफा गलैँचा र फर्नीचर गर्नुहुन्छ? अथवा आइतवार लेट सुतिरहेका? तपाईं सजिलै रिस गर्नुहुन्छ? एक कुकुर रही एक ठूलो छ, महंगा, वर्ष को लागि असर जीवन-फेरबदल निर्णय.
* कुकुर मानव छैनन्, सम्झना. तिनीहरू मानव शब्दहरू वा मामला मा विचार छैन.
तिनीहरूले कथाहरू बताउन सक्दैनन्, narratives पालन, हाम्रो मन पढ्न (तिनीहरूले हाम्रो मूड महसुस गर्न तापनि). तिनीहरू छैनन् “फर बच्चाहरु,” वा छोराछोरीलाई मा सबै. हामी मृत्यु तिनीहरूलाई प्रेम सक्छ, तर तिनीहरूले हामीलाई जस्तै छौं होइन. वास्तवमा, तिनीहरूले हामीलाई मन छौं किनभने भन्दा कुकुर मालिक तिनीहरूलाई प्रेम. तिनीहरूको dogness इन्कार गर्न दुवै प्रजातिहरु एक disservice छ. तिनीहरूले जनावर हो भनेर बिर्सन, प्रत्येक अन्य लागि र खाना लागि instinctual इच्छा गरेर एकदम हद सम्म संचालित, सेक्स, र ध्यान, आफ्नो स्वभावलाई को वास्तविकता परिवर्तन गर्न छ, र तिनीहरूलाई खतरामा गर्न.
* कुकुर चिकित्सक छैनन्, या त.
कुकुर संग तपाईंको सम्बन्ध संभावना प्रभावित र आफ्नो पारिवारिक इतिहास र भावनात्मक पछिल्लो द्वारा आकार गरिनेछ, तर पुरानो दुख निको वा voids भर्न कुकुर क्षमता सीमित छ. मानिसहरू आफ्नो कुकुर आफ्नो भित्री सोचाइ बुझ्न बताउँछ र आफ्नो भित्री रहस्य थाहा हुनेछ, तर एक पशु मा आफ्नो भावनात्मक सामान डम्प छैन. तपाईं समस्या मद्दत चाहिन्छ भने, प्रमुख वा सानातिना, यो प्राप्त. आफ्नो कुकुर राम्रो आफ्नो पति वा पत्नी भन्दा तपाईं बुझ्नुहुन्छ भने, कुकुर एक हड्डी दिन, त्यसपछि एक विवाह सल्लाहकार देख्न जाने, वा धेरै कम से कम आफ्नो जोडीसित केही छलफल छ. आफ्नो कुकुर नसोध्नुहोस् तपाईं खुसी बनाउन वा आफ्नो निराशा व्यवहार गर्न. तपाईंको कुकुर विचार शायद तपाईं आफ्नो बट बन्द प्राप्त र उहाँलाई खुवाउन जाँदै हुनुहुन्छ जब केन्द्रित.
* कुकुर झनै sagacious आत्माहरू र prescient प्राण रूपमा देख्न छन्.
तर्कसंगत सिद्धान्त यो खरीद गर्दैन. एक कुकुर संग सरल आफ्नो सम्बन्ध, राम्रो, कुकुर सरल किनभने. तिनीहरू नियम प्रेम, नियमित र स्पष्टता, नेतृत्व, रोचक बदबू आ रही, अन्य कुकुर, र, पाठ्यक्रम, खाना र यो प्रदान गर्ने मान्छे. तर्कसंगत सिद्धान्त को cornerstones को एक: तपाईंको कुकुर तपाईं बारे मा पागल हो, तर त्यो पनि एक hamburger धारण लगभग कुनै अरू प्रेम गर्न सिक्न सक्छौं.
* कुकुर संग जीवित मेरो दृष्टिकोण को एक bedrock धारणा हामी व्यावहारिक हुनुपर्छ भनी छ, लचिलो, र रचनात्मक, कुकुर मा मान्छे मा कठिन तर सजिलो.
धैर्य को मामला मा आफैलाई को एक धेरै अपेक्षा, संकल्प, र स्थिरता. तपाईं हुन्छन्, कुकुर सूट को पालन गर्नेछ. को मामला मा सोच्ने गर्दिनँ “राम्रो” र “खराब” कुकुर. यी पशुहरू लागू हुँदैन कि मानव शिक्षामा हो. छन्, बरु, छैन कि संसारमा कसरी बुझ्न कुकुर र कुकुर. कहिले काँही, कुकुर स्वाभाविक हिंस्रक हो, आनुवंशिक क्षतिग्रस्त, वा मरम्मत परे दुर्व्यवहार. खुसीको कुरा, तिनीहरूले दुर्लभ छौं.
शीर्ष पांच अनलाइन डेटिङ सुरक्षा उपाय
कसरी प्रेम लागि मूड मा प्राप्त गर्न?